10 Dhibaatooyinka Talooyin canabkii Video Dhibaatooyinka
Haddii aad aqrinayo dhibaatooyin la xiriira geedka canabka ah ka dibna aad degay meeshii saxda ah. In this article, ayaanu ku taxnay 10 dhibaatooyin sare in dadka isticmaala ay la soo gudboonaatay geedcanabka si joogto ah.
Dhibaatada 1: ma maqli karaa wax on geedka canabka ah?
Haddii aad isticmaalayso geedka canabka ah ku saabsan telefoonka mobile ka dibna
Hubi in aad telefoonka waa aamusan yihiin.
Haddii aan weli la xalin markaas Logout geed canab ah oo login dib.
Haddii aan weli la xalin ka dibna dib ugu geedka canabka ah ee aad taleefan
Haddii aad isticmaalayso geedka canabka ah oo ku saabsan wax browser on your computer ka dibna
Haddii aad guurto aad curser badan wax video aad ka arki kartaa icon yar audio dhinaca bidix ee sare ee shaashadda. Haddii ay jirto cross calaamad on icon in ka dibna riix badan icon iyo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u maqlaan audio ah.
Ama hubi mugga of your computer
Dhibaatada 2: ma ciyaari karaa geed canab video on Mozilla Firefox
Haddii aad dhibaato ku ciyaaro geedka canabka ah videos on Firefox iyo awoodo inuu u ciyaaro video isla web browser kale si fiican u yaqaan ka dibna isku day mid ka mid ah talaabooyinka soo socda mid ka mid oo isku dayda inay ciyaarto geedka canabka ah.
Tag Tools Options Advanced Network kaydin doono Content Web iyo saxaafadda Clear Hadda
Tag Options Tools Privacy saarto cookies shaqsi oo guji saar All Kukiyada
Bilow Firefox in hab nabad ah si loo arko haddii wax Extensions ama dardargelinta hardware kasta oo keenaya dhibaatada. Ha guji badhanka Warbixannada Firefox ee suuqa kala hab amaan ah bilowga
Si gab / saarto wixii Extensions Tag Tools-socodka Extensions
Wixii hardware dhibaato xawaaraha ku biiray gudasho la'aanta theme: Tools-socodka Imaanshaha
Disable ciyaaryahanka dhisay-in mp4 warbaahinta
Nooca oo ku saabsan: config in bar cinwaanka iyo heli media.windows-warbaahinta-foundation.enabled doorbidida oo qarka u saaran inuu been.
Dhibaatada 3: ma arki karaa geed canab video laakiin maqli karo audio on Chrome
Fadlan ha soo socda haddii aad kaliya maqli karo audio, laakiin ma arki karto video
Ku qor chrome: // calamada sudhaan cinwaanka
Raadi galo loo yaqaan Disable hardware-dardargalinta video fasirid
Waxaa Disable adigoo gujinaya sahlo ka hooseeya uu qoraalku
Dhibaatada 4: ma xaalkaa karaa ama badbaadin geedka canabka ah videos on phone Windows
Haddii aad beddesho telefoonka mobile ka iPhone ama Android inay Windows ma waxaad awoodi doontaa inaad si xaalkaa video mana awoodaan si loo badbaadiyo wax video qabyada xijisay ama la wadaago aad u noqon doonaa. Tani waa sababta oo laba muuqaalada weyn safarka Time IYO KAL-weli waxaa laga heli karaa telefoonka daaqadaha aan. Rajaynaynaa Twitter dhow lagu kordhin doono labadan muuqaalada muhiim ah in la phone version Windows ah.
Dhibaatada 5: ma login karaa geed canab ka dib markii deactivating aan xisaab Twitter
Haddii aad loo isticmaalo xisaabta Twitter ah inay la soo wareegto ilaa iyo canabkii oo aan la xiriira xisaabta email kula xisaabta, ma waxaad awoodi doontaa inaad gasho koontadaada geedka canabka ah haddii aad furi aad xisaabta Twitter. Markaa waxaa ugu fiican inaad cusboonaysiiso goobaha aad la leedahay hadda Twitter account ama cinwaanka email ka hor deactivating Twitter-ka. Haddaba haddii aad furi aad xisaabta Twitter ka hor la xariirta goobaha aad, waxaad u baahan tahay si loo soo nooleeyo aad xisaabta Twitter si ay u gasho.
Xusuusnow, waxaad reactivate karo xisaabta ka hor 30-ka maalmood ee deactivation. Si aad u falceliya xisaab:
Booqo twitter.com/login internetka
Waxaad ku qortaa magacaaga ama cinwaanka email iyo password
Riix calaamad ku saabsan iyo in aad xisaabta la soo nooleeyey doonaa
Dhibaatada 6: Waa maxay sababta aan diiwaan gelin kartaa URL profile aan?
Laga yaabaa in aadan awoodin in ay iska diiwaan profile URL aad sababahan soo socda:
URL ayaa durbaba laga yaabo in loo isticmaalo.
Waxaad laga yaabaa in mar hore ay soo xulay URL profile ah.
Your xooggiisii ​​URL profile ku jira qof oo kale, "_", ama "." "-".
Erayga baad lama ogola in geedka canabka ah
Dhibaatada 7: Sidee ayaan u tirtirto canabka Videos?
Waxaad tirtiri kartaa geedka canabka ah videos sidoo kale ka app mobile geedka canabka ah ama ka bogiisa bulshada canabka ah.
Delete isticmaalaya app ee mobile
Fur app canabka on telefoonka gacanta iyo gasho canabka ah.
Dul video ah oo aad jeclaan lahayd in aad tirtirto.
Tubada in button share ka dooro tirtirto this post. Taasi waxaad samayn lahaydeen oo dhan iyo video laga tirtirayaa.
Delete isticmaalaya goobta shabakada bulshada
Soo gal canabka ah, iyo falgali in video ah oo aad jeclaan lahayd in ay tirtirto
Riix Share button dooro post tirtirto.
Dhibaatada 8: Maxaan sameeyaa haddii aan post ku fashilantay in ay geliyaan?
Haddii wax post ku fashilantay in ay geliyaan markaas hubi ugu horeysay xiriir shabakada. Haddii la xidhiidha waa ok markaas retry Upload ah ee xunbo on icon Refresh ah. Dhowr ilbiriqsi ka dib video la gelin doonaa. Waxa kale oo aad joojin kartaa Upload ah oo bilaash ah ilaa safka. Si aad u joojisid Upload ah, saxaafadda iyo qaban video in.
Dhibaatada 9: Maxaad u canabka Message ay ku guuldareysato inay soo diraysid?
Haddii aad rabto in aad soo dirto fariin video ah in qof ah oo aan soo socda waxaad ka dibna aad u baahan tahay si loo xaqiijiyo lambarka telefoonka aad. Si tan loo sameeyo:
Tubada icon ku quusiyay hoos VM aad ayaa isku dayaysa in ay u diraan
Tubada sii wadi
Ku qor lambarka telefoonka aad iyo soo socota ka jaftaa
Ku qor code xaqiijin oo la Galiani aad u
Dhibaatada 10: Halkee waa fursad Logout on app geedka canabka ah?
Tubada in icon guriga iyo dooro profile
Hoos si hoose ee shaashadda oo halkaas waxaad ka heli doontaa Logout
Tubada in Logout
Dhibaatada 11: Maxaad bannaan ee bilaashka ah xasuusta telefoonka aan si degdeg ah hoos u dib markii rakibidda geed canab on my phone Android?
Haddii aad si joogta ah u booqan app ah geedka canabka ah oo ku saabsan qalab Android aad ka dibna boos lacag la'aan ah ku xasuusta telefoonka aad hoos u dhigi doontaa si dhakhso ah. Tani waa cayayaanka ah oo la filayo in lagu xallin ee qoraalkii soo socda. Sababta ka dambeysa arrintan waa horumariyaha ah ayaa laga yaabaa in la illoobay in lagu daro heer kasta oo xaddiga khasnado app ee loo ogol yahay in ay isticmaalaan.
Ilaa cayayaanka ka go'an yahay, haddii aad rabto in ay nadiifiso khasnado adigu by in app canabka ah waa la isticmaalayo qalabka Android aad ka dibna raac tallaabooyinkan:
Tag menu goobaha qalabka Android aad
Dul info app ee
Dooro canabka ka mid ah liiska
Hadda ka jaftaa in khasnado cad
Top 50 Cinabyo Most Aragti on Vinescope
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii screen deg deg ah
> Resource > Video > 11 Dhibaatooyinka Talooyin canabkii Video Dhibaatooyinka